Football Khabar » ब्राजिलका विलियनले फाइनल खेल गुमाउने !
ब्राजिलका विलियनले फाइनल खेल गुमाउने !
एजेन्सी, असार १९
आफ्नो भूमिमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधि जित्ने दौडमा रहेको ब्राजिललाई झट्का लागेको छ । उसका प्रमुख खेलाडी विलियन घाइते भएका छन् । ब्राजिलका प्रशिक्षक टिटेले चोटका कारण विलियनले फाइनल खेल गुमाउने पुष्टि गरेका छन् । जुलाई ८ मा ब्राजिलले उपाधिका लागि पेरूको सामना गर्दैछ । पेरूले आज बिहान सेमिमा चिलीलाई ३–० ले हराएर उपाधिका लागि ब्राजिलसँगको भेट पक्का गरेको हो ।
अघिल्लो दिन सेमिफाइनल खेलमा अर्जेन्टिनाविरुद्ध खेल्नेक्रममा विलियन घाइते भएका थिए । चोट बोकेपछि उनलाई खेलको ४६औं मिनेटमै सब्सिच्युट गर्दै एभर्टनलाई मैदान छिराइएको थियो । पछि स्वास्थ्य जाँचपछि उनी घाइते भएर फाइनल खेल गुमाउने पुष्टि प्रशिक्षकले गरेका हुन् । ब्राजिलले सेमिमा अर्जेन्टिनालाई २–० ले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो ।
विलियन सुरुआतमा ब्राजिलको अन्तिम टोलीमा परेका थिएनन् । टोलीका प्रमुख फरवार्ड नेइमार कतारसँगको मैत्रीपूर्ण खेल दौरान घाइते भएपछि टिटेले विलियनलाई टोलीमा बोलाएका थिए । तर, टोलीमा महत्त्वपूर्ण खेलाडीको भूमिका निभाइरहेका उनी चोटग्रस्त भएपछि अब फाइनल खेलबाहिर भएका छन् ।
प्रकाशित मिति १९ असार २०७६, बिहीबार ०३:४२